Gadzira iyo Apple Kuona Kushambidza Kushambidza Kushambidza App uye uwane zvakanyanya mairi | Ndinobva mac
Iwe pamwe unotova neazvino mashandiro esisitimu akaisirwa pane yako AppleWatch. watchOS 7 inounza akawanda maficha maficha. Matunhu matsva, matambudziko akasiyana uye pamusoro pezvose chimwe chezviitiko zvinogona kubatsira kudzivirira kupararira kwezvirwere nekusangana nenzvimbo dzinopinda. Tiri kutaura zvekugeza mawoko. Iwe unofanirwa kuziva kuti kuti uwane zvakazara mairi, Kutanga iwe unofanirwa kuita mashoma matanho.
Kuti uwane zvakanakisa kubva mukushambidza maoko application iyo inouya neWatchOS 7, isu tinofanirwa kuita nhanho mbiri dzakapfuura uye zvese zvichafamba mushe. Ramba uchifunga kuti haufanire kumisikidza chero chinhu kuti chishande. Nekutadza kaunda ichatanga kana ichizvionera kuti tiri kugeza maoko. Asi ichokwadi kuti tinogona kugadzirisa mashandiro ayo zvishoma.
Kubva ku iPhone, tinoenda kuApple Watch application uye tinotsvaga "kuwacha maoko". Kana isu tikabaya pazviri, yechipiri menyu ichavhura ine akati wandei sarudzo yekumisikidza. Tinogona kusimbisa zviziviso nekutadza. Kana tichida, tinogona kuvamisa kana kuvatumira kuNotification Center. Iwe unogona zvakare kugadzirisa kuunganidzwa kwezviziviso pano kana uchida.
Isu tinoshandisa timer yekugeza mawoko uye nenzira iyi patinotanga kugeza maoko edu masekondi makumi maviri echimedu (yakakurudzirwa neCDC nemamwe masisitimu senguva shoma yekubvisa utachiona hunogona kutirwarisa) ichaitwa. Dzimwe nguva zvinoita sekunge hazvishande, asi nemoyo murefu tichaona kuti dzimwe nguva inogoneswa panoperera account.
Uyewo Izvo zvakakosha kuita kuti chiyeuchidzo chiitwe kuitira kuti itiyambire kugeza maoko edu kana tave kure nemusha uye tinodzokera kwairi. Ichatiratidza chiziviso chichatiudza "izvozvi zvawave usipo kwenguva, inguva yekugeza maoko. Inonyanya kubatsira kupedzisa mukati meimwe yematanho ekudzivirira kudzivirira kutapuriranwa neCoronavirus.
Nakidzwa nechinhu chitsva. Izvo zvakafanana neyezvindori. Zvinokukurudzira kuti uite zvinhu kusvika kumagumo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Gadzira iyo Apple Watch Kushambidza Hwadhi App uye uwane zvakanyanya mairi
Iyo Nike Run Club app inowana kutaridzika kutsva neiyo nyowani yakasarudzika yekutarisa kumeso, "Twilight Mode" uye "Streaks"